WordPress: Laba shey oo SEO ah oo loogu talagalay abuurista Meta Tag. | Martech Zone
Arbaco, Juun 4, 2007 Khamiis, Maarso 31, 2016 Douglas Karr
Waxaan ku qoray laba qoraal oo kala duwan oo ku saabsan horumarinta sumadaha meertadaada, ereyada muhiimka ah iyo sharraxaad. Erayo-fure ayaa hubaal ka caawin doona boggaaga helid, laakiin sharraxaadda ayaa ka caawin doonta booqdayaasha mashiinka raadinta gujinta iyada oo la siinayo sharaxaad ka fiican.
Halkii aad barnaamijyadan kafiirin lahayd sida aan ku taliyay, waxaa jira dhowr plugins oo shaqada kuu qaban kara.
Iyada oo la Yoast SEO plugin waad xakamayn kartaa bogaga Google ku muujiyo natiijooyinkiisa raadinta iyo bogagga aanu tusin. Yoast kaliya kaa caawin mayso inaad qaabeeysid sharraxaadda astaamaha, sidoo kale waxay kaa siinaysaa jawaab celin ku saabsan adeegsiga ereygaaga muhiimka ah iyo horudhac qurux badan oo ku saabsan sida boggaagu u eegi doono bogga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta.
Yoast sidoo kale waxay bixisaa xulasho ah Premium Add-On SEO plugins in aan sidoo kale kugula talin lahaa sidoo kale.
Dhammaanba mid ka mid ah SEO Pack
John Chow ku taliyay ah Dhamaan hal SEO Pack Plugin laakiin waligay sifiican uguma fiirsan plugin ilaa xalay. Ii xishood. Fidinta waxay qabataa shaqo cajiib ah markay isticmaaleyso “Qeybinta Ikhtiyaariga ah” ee WordPress sida boggaaga sharaxaada ah.
Waa tan sida natiijada mashiinka raadinta ay u egtahay (waxaad gujin kartaa sawirka si aad u aragto boostada dhabta ah):
Taasi waxay tiri, All in One SEO Pack waxay qabataa shaqo aad u fiican Sharaxaadda Meta Tag, laakiin ma aaminsani inay u fiicantahay shaqo Keyword Meta Tag. Waxay si fudud ugu xilsaartaa Qaybaha aad xulatay inay yihiin ereyo muhiim u ah boostadaada, oo aan ku dhowaad sharraxnayn Waad dejin kartaa ereyo dheeri ah oo dheeri ah boostada, laakiin looma adeegsado meel kale.
Taasi waa halka ay soo jeedintayda soo socota ee soo socota ku timaaddo, Ultimate Tag Warrior. Waa tan sida loo hubiyo inaadan qorin astaamaha meta keyword adoo adeegsanaya All in One SEO Pack, dami ikhtiyaarka Isticmaalka Qeybaha loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee META:
Hada markasta oo aad qoreysid boostada, hubi inaad ku buuxisid qeybta Xulashada Ikhtiyaariyada leh weedho fudud oo fudud oo soo jiidan doona baarayaal badan si ay ugu gujiyaan boostadaada:
Tags: dhammaanba hal sanduuqgooltilmaanta metasumad metaSEOyoast seo
Jul 9, 2007 markay ahayd 7:55 AM
Waan kugu raacsanahay isku darka labada plugins, Douglas. Waxaan dhawaan ku rakibay All In One mid ka mid ah boggeyga oo waa shey weyn laakiin, sidaad u sheegto, qodobka muhiimka ah maahan midka ugu weyn. Taas markii la dhaho sida Google oo kale culeys badan ha saarin ereyada muhiimka ah ee diiradda saar cinwaanka iyo sharaxaada halkii.
Jul 12, 2007 markay tahay 3:19 PM
Waad ku mahadsan tahay tan. Qeybaha ikhtiyaariga ah waa wax aan horay u isticmaali jiray laakiin aan sida ugu macquulsan u awoodin. Qaar badan oo ka mid ah qoraaladayda ugu caansan ayaa gebi ahaanba ka maqan sheeko.
Dib baan u noqon doonaa oo waxaan hubin doonaa in 20-kayga ugu caansan ee ugu caansan ay leeyihiin qormooyin hufan, oo lagu daray qoraal kasta oo cusub oo aan qoro mustaqbalka. Waxaan sidoo kale eegi doonaa fiiladaas SEO sidoo kale.
Agoosto 21, 2007 saacaddu markay ahayd 1:52 PM
> Runtii wax la yaab leh ayey noqon laheyd haddii labadan qoraa ay madaxyadooda isku dari karaan oo ay labada isku xirmaan isku dari lahaayeen.
Xirmada 'SEO' waxay u isticmaali kartaa tags ka UTW sida keywords haddii aad dejiso doorashadan, laakiin sida aad kugula talinayso waxaad dabcan sidoo kale u oggolaan kartaa UTW inay xakameyso ereyada muhiimka ah ee meta. Sidaad ogtahay UTW qaybtiisii ​​ugu dambaysay waxay ahayd fin, maxaa yeelay WordPress 2.3 wuxuu yeelan doonaa taageero tag-ah. Xirmada SEO waxay u badan tahay inay taageeri doonaan cinwaanada cinwaanka si dhakhso leh, labadaba UTW iyo WordPress 2.3. Haddii aad hayso wax codsiyo dheeri ah oo la-qabsasho ah ii sheeg.
Sep 14, 2007 at 7: 40 PM
Waad ku mahadsantahay talooyinka.
Sida qof kasta oo kale waxaan ku hayaa waxyaalahan ku jira boggeyga. Laakiin waxay umuuqdaan inay si walba iskaga celinayaan. Waad ku mahadsantahay sida wax ku oolka ah ee ay uga wada shaqeeyaan.
16, 2007 at 10: 06 AM
Fikradaha wanaagsan ee tan. Meta tags waa qayb muhiim ah oo lagu dejiyo guul, iyo mashiin raadin saaxiibtinimo, joogitaanka websaydhka.
Waa feker qosol leh oo ka hadlaya summada ereyada muhiimka ah. Dhamaanteen waxaan u muuqanaa inaan isticmaalno. Waxaan ka fiicnaanayay boggaga internetka in ka badan 10 sano, gadaal ka hor intaanan ogaanin inaan wax ka fiicneyn! Maanta waxaan ognahay in matoorada waaweyn xitaa aysan eegin keywords keyword… ama sidaa darteed waxaan u maleyneynaa si kasta.
Haddii ay arintu sidan tahay, maxaan u isticmaalnaa maaddada keyword meta? Kuwaas matoorradaas yar ee halkaa yaal oo weli eegay astaamaha furaha? Shaki oo hela taraafiko badan (hadday jiraanba). Dhaqanka awgiis? Malaha. Waa wax lala yaabo in aan wali adeegsado.
Waa maxay fikraddaada arrintan?
16, 2007 at 10: 44 AM
Erayada muhiimka ah ee Meta ayaa laga yaabaa inaysan muhiim u ahayn matoorada waaweyn, laakiin si toos ah ayaa looga soo saari karaa astaamahaaga (kuwaas oo iyaguna muhiim u ah taraafikada). Sharaxaadda moodana waxay kordhin kartaa CTR-gaaga waqtiga weyn.